Aqalka Cad ee Mareykanka oo loo gudbiyey qorshe ku saabsan Somalia labada sano ee soo socota
Washington DC (Caasimada Online) – Waaxda Gaashaandhigga Mareykanka ee Perntagon ayaa sheegtay inay qorsheyneyso in laba sano oo hadda dhimman ay sii waddo dagaalka lagula
Muqdisho (Caasimada Online) – Amiirka dalka Qadar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ayaa shaaca ka qaaday in dowladiisa aysan afka ka qabsan doonin baahinta Dukumiintiyo
Ethiopia oo cadeysay mowqifkeeda ku aadan saldhiga safaaradeeda Tel Aviv ee Qudus
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Ethiopia ayaa daboolka ka qaaday inaysan adeeci doonin go’aanka uu Madxaweynaha Mareykanka Donald Trump magaalada Qudus ugu hibeeyay Israel. Ethiopia waxa ay sheegtay in howlaha Safaaradooda ay ...
Xog: Maxaa hortaagan qorshaha magacaabista safiirada cusub ee Somalia?
Muqdisho (Caasimada Online) – Warar hoose oo aan ka heleyno Wasaarada Arrimaha Dibadda Somalia ayaa sheegaya in dib u dhac uu ku imaaday qorsho lagu doonaayay in lagu magacaabo Safiiro cusub. Xogaha ...
Xarunta la dagaalanka Fikirka xagjirnimada oo hoostagta wasaaradda gaashaandhigga ee Sucuudiga ayaa ku baaqday in la qabanayo dood cilmiyeed isugu jirta dhinacyada Fiq-higa iyo Fahamka, taas oo ku saabsan sidii ...
Jubbaland oo digniin kasoo saartay arrin uu Mareykanka ka wado Somalia
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo dhawaan dhowr duqeyn ay ka dhacday degaanada maamulka Jubbaland, ayaa waxaa qeylo dhaan ka muujiyay duqeyntaasi baarlamaanka maamulka. Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa ka digay in diyaaradaha ...
Boosaaso (Caasimada Online) – Saraakiil iyo dagaal-yahano ka tirsan Ururka Al Shabaab oo baxsad ah, ayaa waxaa la soo sheegaya in ay gaareen Buuraleyda Galgala ee Gobolka Bari, iyagoo ku ...
Waddooyinka waaweyn ee Muqdisho oo xiran maalintii labaad
Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maalintii labaad xiray qeybo ka mid ah jidadka ugu muhiisan ee magaalada Muqdisho. Ciidamada oo weli tuban waddooyinka ayaa xanibay dhammaan isku socodka ...
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in Madaxtooyada maamulka uu saacado ka hor kulan khaas ah ku dhexmaray Horjooge ku-xigeenkii hore ...
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa lagu dilay magaalada Sanca, sida lagu sheegay raadiyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Xuthiyiinta. Telefishin ay Xuutiyiinta maamulaan oo lagu magacaabo ...